'राइट' दाजुभाइले जहाज बनाउनुअघि नै नेपालमा 'एयरबस' बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी :: PahiloPost
24th May 2018, 04:32 pm | १० जेठ २०७५
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राइट दाजुभाइले जहाज बनाउनु अघि नै नेपालमा 'एयरबस' बनिसकेको दाबी गरेका छन्। आज भृकुटीमण्डपमा आयोजित शैक्षिक मेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पुष्पक विमानलाई उदाहरण दिँदै नेपालमा उहिल्यै एयरबस बनेको दाबी गरेका हुन्।
नेपालीहरु पूर्खादेखि नै दुरदृष्टि राख्ने भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हाम्रा पुर्खा यति भिजिनरी। १९०३ बाट राइट ब्रदरले प्लेन बनाउन शुरु गरे। हाम्रा पुर्खाले काल्पनिक होस् या जे सुकै होस् तर पुष्पक विमानबाट राम र सीताहरुलाई लंकाबाट लिएर अयोध्या फर्केका थिए।'
ओलीले थपे, 'पुष्पक विमानमा चढाएर। फेरि पुल बनाएर अथवा अस्ति नै बनाएको पुलबाट तरेको हैन। पुष्पक विमानबाट फर्केका थिए। कल्पनाकै उडान भए पनि हाम्रा पूर्खाहरुले एकजना यसो चढेर पखेटा लगाएर चरा झैं उड्ने कल्पना गरेको होइन। पुष्पक विमानमा पल्टनै चढेर आउने एयरबस नै रहेछ। राम लक्ष्मण सीता सुग्रीव हनुमान उहाँहरुसँग लड्न गएका पल्टन सारा सबै आए।'
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा संगीत सिर्जनादेखि नक्षत्र पत्ता लगाउनसमेत अगाडि रहेको ओलीले बताए। प्रधानमन्त्रीले नौ ग्रह नै नेपाली ज्योतिषले पत्ता लगाएपछि मात्र वैज्ञानिकले पुष्टि गरेको दावी पनि गरे।
'राइट' दाजुभाइले जहाज बनाउनुअघि नै नेपालमा 'एयरबस' बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी को लागी ५ प्रतिक्रिया(हरु)
janak Man Dangol [ 2018-05-26 19:55:05 ]
धर्म नमान्ने कम्युनिस्टको मुखबाट धर्मिक त्यो पनि मिथक कथाको बधाई चढाई किन ?
कबिराज [ 2018-05-26 16:40:57 ]
औषधि सकिएछ कि क्याहो बुढोको
कबिराज [ 2018-05-26 16:39:11 ]
Gaurav [ 2018-05-25 10:37:45 ]
यस्तै बकम्फुसे हावादारी नेताले गर्दा आज हामी पछाडी परेका हौं
Mohan devkota [ 2018-05-25 08:31:42 ]
Pm jiu bakbas dehri bakho ho ki ??